शेयर बजार Archives ~ Banking Khabar
सेयरबजार : सोमबार ३३.२७ अंकले बढ्यो
बैंकिङ खबर । सेयर बजार सोमबार ३३.२७ अंकले बढेको छ । सूचक अब १२९८.७३ अंकमा पुगेको छ । विहान ११ बजे खुलेको बजारमा कारोबार एक अर्ब नजिक कारोबार भएको छ । दिनभरीमा १७६ कम्पनीको ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। बजारमा सूर्योदय लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, स्वदेशी लघुवित्तका लगानीकर्ताले कमाएका
लगातार देस्रो दिन शेयर बजारमा उछाल, लगानीकर्ता उत्साहित
बैंकिङ खबर । शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज बुधबार पनि उछाल आएको छ । आज पनि सेयर कारोबारमा ‘पोजिटिभ सर्किट’ लागेको हो । बिगत लामो समय बन्द रहेको सेयर बजार खुल्दा बजारमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेपछि व्यवसायीहरु समेतउत्साहित देखिएका छन् । आज बजार बढेर ‘पोजिटिभ सर्किट’ लागेपछि आजको कारोबार स्थगित भएको छ । आज ४०
आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राय सुझाव लिने उद्देश्यले वेबिनारमार्फत् छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष भिष्म राज ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा बोर्डका पूर्व अध्यक्षहरू, नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, धितोपत्र व्यवसायी
नेपाल धितोपत्र बोर्डको २८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापनाको २७ वर्ष पुरा गरी २८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा बोर्डले वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई वेबिनार मार्फत सम्पन्न गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय अर्थ र सूचना तथा संचार मन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहनुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रमको विशेष अतिथिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका
शेयर बजार पनि जेठ २० गतेसम्म बन्द रहने
बैंकिङ खबर । सरकारको हिजो बसेको मन्त्री परीषद् बैठकले जेठ २० गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेसँगै शेयर बजार पनि सोही अवधिसम्म बन्द रहने भएको छ। नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले लकडाउनलाई निरन्तरता दिइएकाले बजार पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि लकडाउनको अवधिमा मंगलबार र बुधबार (वैशाख ३० र ३१ गते) २ दिन बजार खुल्ला
बैंकिङ खबर । धितोपत्रबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. तथा धितोपत्र व्यवसायी लगायत संस्थालाई मिति २०७७।०१।३१ गते सम्म जारी गरिएका सबै पास रद्द गरिएको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ । बोर्डले नेपाल सरकारले लकडाउनलाई थप कडाईका साथ अवलम्वन गर्न गरेको व्यवस्थाका सन्दर्भमा बोर्डको मिति २०७७।०२।०१ को निर्णयानुसार धितोपत्रको दोश्रो बजारको कारोवार लकडाउनको
दुई दिन खुलेको सेयर बजार फेरि बन्द, लकडाउन सकिएपछि मात्रै खुल्ने
बैंकिङ खबर । लकडाउनपछि बन्द रहेको शेयर बजार मंगलबारदेखि दुई दिन खुलेपनि आज बिहिबारबाट शेयर कारोबार फेरि बन्द गरिएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज देखि नै शेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।केही दिनअघि लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै कारोबार सुरु भएको भएतापनि दुई नै दिन बजार ओरालो
लकडाउनमा बजार खोल्दा – सेयर बजारमा ठुलै धक्का लाग्ने संकेत
बैंकिङ खबर । लकडाउनका अबधिमा सेयर बजार संचालन भएको छ । बैशाख ३० गतेबाट खुलेको सेयर बजारमा पहिलो दिन २५ अंकले गिरावट आएको छ । यो कुल प्रतिशतको २ प्रतिशतले बजार घटेको हो । यसले लकडाउन अवधिको संकेत गरेको छ । सेयर बजार निरन्तर खोल्ने हो भने निरन्तर गिरावट आउने संकेत देखाएको छ । यस
सेयर बजारमा नेगेटिभ सर्किट ब्रेकका कारण कारोबार स्थगित
लकडाउनका कारण ५० दिन बन्द भएर मंगलबार खुलेको शेयर बजार नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारी मार्फत् आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय भए अनुसार ५० दिनको अन्तरालपछि बजार खुलेको थियो । आज देखि दैनिक विहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दुई घण्टा कारोबार गरीने
‘पुँजीबजार’ बुझ्नलाई यति नजेज चाहिन्छ (लकडाउनमा वित्तीय शिक्षा )
बैंकिङ खबर । धितोपत्र बजारमा प्रवेश गरेकाहरु सबैले धितोपत्र बजारबारे सम्पूर्ण कुराहरु जानेका हुन्छन् भन्ने हैन । कतिपय मानिसहरु साथीभाईको लहलहैमा लागेर पनि शेयर कारोबारमा हात हाल्छन् । तर, बजारसम्बन्धि सामान्य कुराहरु नबुझ्दा आफूलाई निकै पछाडि परेको महशूस गर्छन् । त्यस्तै, कतिपय मानिसहरु धितोपत्र बजारबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा बजारमा छिर्ने रहर मनमै पालेर बसेका हुन्छन्
सोमबारदेखि लकडाउन अघिको शेयर कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुने
कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले रोकिएको शेयर कारोबारको राफसाफ आगामी सोमवारदेखि हुने भएको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले बिज्ञप्ति जारी गर्दै चैत १० गते अघि भएको शेयर कारोबारको बाँकी राफसाफ सोमवारदेखि सुचारु गरिने जनाएको छ ।
मंगलबारदेखि दुई घण्टाका लागि सेयर बजार खुल्ने
बैंकिङ खबर । विश्वव्यापी लकडाउनका कारण बन्द भएको धितोपत्र कारोबार मंगलबारदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७७/०१/२४ को निर्णयानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सहकारीमार्फत् आवश्यक सेवा प्रवाहगर्ने निर्णय भए अनुसार मिति २०७७/०१/२६ गते बोर्डको कार्यालयमा बजार सम्बद्ध पक्षहरू NEPSE, CDSC, Merchant Banker, DP, Broker सँग भएको छलफल समेतको आधारमा देहाय बमोजिमको
सेयर बजारका लगानीकर्तालाई वारेन बफेटका पाँच टिप्सहरु
बैंकिङ खबर । वारेन बफेट विश्वको सबैभन्दा ठूलो शेयर बजार लगानीकर्ता मानिन्छन् । विश्वका करोडौं व्यक्तिहरू उनको प्रत्येक गतीबिधिमा नजर राख्छन् । हालसालै उनले लगानीकर्ताहरूलाई सफलताका लागि केहि टिप्स दिएका छन् । जुन तपाईको लागि पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । १) सतर्क रहनुहोस् : तपाईले शेयर बजारमा लाभ उठाउनु पर्छ, तपाईको लगानी बढ्नको लागि हो,
सेयर कारोबार पनि वैशाख २५ गतेसम्म बन्द
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले वैशाख २५ गतेसम्म नै सेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले लक डाउन अवधिभर सेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले लकडाउन थप १० दिन लम्बाउने निर्णय गरेपछि सो अवधीसम्म शेयर बजार पनि बन्द हने भएको छ । काबुबाहिरको
नेपालमा शेयरबजार खोल्ने संकेत
बैंकिङ खबर । नेपालको शेयरबजार खोल्ने संकेत देखिएको छ । गत चैत १० गतेदेखि बन्द रहेको शेयरबजार खोल्न त्यस क्षेत्रका संबन्धित निकायहरु सकारात्मक देखिएका छन् । अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेकोले नेपालमा बजार बन्द गर्नुपरेको थियो । लामो समयदेखि बजार बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू समेत मर्कामा परेका छन् । अब अन्य देशमा